Aung Khin December 11, 2012 - 12:20 am What kind of magazine?
Reply မောင်မောင်ကျော်ဝင်း December 11, 2012 - 12:30 am ဧရာဝတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူမောင်အောင်ဇော်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီသူ
Reply ဗမာ December 11, 2012 - 4:41 pm ဒီကွန်မင့်ကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ လူဖြောင့်လူတော် ကိုအောင်ဇော် ဦးစီးတဲ့ ဧရာဝတီ ဆထက်တံပိုးအောင်မြင်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ။
Reply Maung Maung Myint December 11, 2012 - 1:50 am Congratulations, Irrawaddy! Hope you will becomealeading English language print magazine in Burma.
Reply lin linn December 11, 2012 - 3:38 am Congratulations for your effort to help in Burma democracy transition
Reply Aung Thein Nyunt January 18, 2013 - 12:33 pm မြန်မာ သတင်းစာတစ်စောင် လောက် တစ်နှစ် အတွင်း လောက် မှာ ထုတ် ဖို့ ကြိုးစားပါ ခင်ဗျား။